सलमानले प्राइभेट पार्ट मा गुलु चिप’कायर,प्रेमिकासँग सम्बन्ध राख्दा भयो मृत्यु।। |
September 24, 2021 adminLeaveaComment on सलमानले प्राइभेट पार्ट मा गुलु चिप’कायर,प्रेमिकासँग सम्बन्ध राख्दा भयो मृत्यु।।
केहि मानिसहरु लाई ओवेर बनाउने बानी हुन्छ। चीजहरु जसरी हुनु पर्छ त्यस्तै हुन दिनु पर्छ। तर केहि मानिसहरु प्रकृतिको नियम को बिरुद्ध जान्छन् र आफ्नो अतिरिक्त दिमाग राख्छन्। अब यसो गरेर, कहिलेकाहीँ उनीहरु लाभान्वित हुन्छन् र कहिलेकाहिँ उनीहरुलाई हानि हुन्छ।गुजरातको अहमदाबाद, फतेवाडीमा एउटा केटालाई अलि बढी दिमाग लगाउनु यति महँगो भयो कि उसले आफ्नो ज्यान गुमायो। केटाले आफ्नो प्राइभेट पार्ट गुलु (फेवी छिटो) ले टाँसेको थियो
पुलिसलाई थाहा भयो कि केटाले आफ्नी प्रेमिका संग सम्बन्ध बनाइरहेको थियो तब उसले आफ्नो प्राइभेट पार्ट लाई गुलु संग अड्यायो। पुलिसले यसो गर्नुको कारण खोज्न थाल्यो। उनलाई कारण थाहा भयो, उनी हरु पनि उडाईयो होस। यो धेरै अनौठो थियो।आजको जवान केटाहरु विवाह भन्दा पहिले सम्बन्ध बनाउन मा धेरै विशेषज्ञ छन्। तपाइँ देख्न र हरेक दिन यस्ता घटनाहरु सुन्न पाउनुहुन्छ। होटल आफ्नो सम्बन्ध बनाउन को लागी सबैभन्दा मनपर्ने ठाउँ हो।
अहमदाबादको फतेवाडी निवासी २५ वर्षीय सलमान मिर्जा पनि आफ्नी प्रेमिकासँग सम्बन्ध राख्न चाहन्थे। उनी प्रेमिकालाई क्षेत्र मा स्थित एक होटल मा लगे।स्रोतको अनुसार दुबैले होटल मा मादक पदार्थ को सेवन गरे। उनी लागूपदार्थको नशामा थिए। यस समयमा उनले सम्बन्ध राख्ने निर्णय गरे। दुवैले सम्बन्ध बनाए तर भोलिपल्ट सलमान मिर्जा बेहोस अवस्थामा भेटिए।
यस्तो अवस्थामा परिवारले उनलाई हतारमा अस्पताल पुरायो। उनको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। अर्कोतर्फ, सबैको दिमागमा एउटै प्रश्न उठिरहेको थियो कि सलमानले सम्बन्ध बनाउँदा आफ्नो प्राइभेट पार्ट मा किन टाँसे गुलु।सलमानको मृत्युपछि प्रहरीले शव पोस्टमार्टमको लागी पठाएको थियो। यसको रिपोर्ट आए पछि मात्र पुष्टि हुन्छ कि सलमान को मृत्यु के कारण थियो। तर, प्रारम्भिक अनुसन्धानमा प्रहरीको विश्वास छ कि बालकको मृत्यु प्राइभेट पार्ट टाँसिएको कारण भएको हो। जे होस्, सबैजना भिसेरा रिपोर्ट आउन को लागी पर्खिरहेका थीय।
मिडिया रिपोर्टका अनुसार सलमानले आफ्नी प्रेमिकासँग सम्बन्ध राख्दा कण्डम थिएनन्। यस्तो स्थितिमा, उनी डराएका थिइ कि उनकी प्रेमिका गर्भवती हुन सक्छिन्। केवल यो डर को कारण, उहाँले आफ्नो निजी भाग glue। येहि कुरा उनको मृत्यु को कारण बन्यो। यदि सलमानले १० रुपैयाँमा कण्डम किनेको भए सायद उनी आज जिवित हुने थिए। खैर, उनको यो अनौठो निर्णय को कारण पनि लागूपदार्थ को नशा हुन सक्छ। नशाको अवस्थामा, मानव बुद्धिले काम गर्न बन्द गर्दछ। त्यसैले उसले केहि नराम्रो गर्छ।
अमेरिकाबाट देउवालाई फेरी यस्तो चेतावनी,सबै नेपाली जाग्नुपर्ने अवस्था सिर्जना!
श्रीमान् तीन बर्ष देखि साउदी अरेवियामा पसिना बगाउँदै,बाग्लुङमा श्रीमति कसरी भइन् गर्भवती?
काठमाडौंको बानेश्वरमा आगोलागी,पलभरमै लाखौ बराबर धनमाल खरानी।पुरा हेर्नुहोस